Uchwepheshe We-Semalt Uyazi Indlela Yokugwema Ukukhohliswa Ngama-Fraudsters E-Inthanethi Ukuthumela I-Referrer Spam
Ama-webmasters abahlukahlukene nabathengisi basebenzisa i-Google Analytics ukulandelela izivakashi, ukuvakashelwa kwekhasi, isikhathi esichithwa kusayithi, nokuthi abasebenzisi bahlanganyela kanjani namasayithi (ukuthunyelwa kwefomu, ukudlala kwevidiyo, ukubhaliswa kwamaphephandaba, ukulandelela kwe-e-commerce). Eminyakeni emibili eyedlule, abakwa-webmasters baqaphele izimoto zokudlulisa okusolisayo kuma-akhawunti wabo we-Google Analytics futhi bacabanga ukuthi imibono yamanga yayivela ezizindeni ezingekho emthethweni nakwezomthetho nezindawo zokubambisana. Abakwa-Spammers kanye nama-SEOs omnyama abesebenzisa amasu ahlukahlukene ukwengeza izizinda zabo kuma-akhawunti we-Google Analytics ukwenza abantu bazibuze ukuthi kwenzekani. Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uJulia Vashneva, utshela ukuthi i-darodar - lamberts vitamin e.com iyaqhubeka ithumela amakhulu ezinkulungwane zezivakashi kumasayithi kanye nama-akhawunti we-Google Analytics inamba enkulu.
Abanye abakwa-webmasters baye babika ukuthi ama-akhawunti angamanga okuthutha ama-trash angu-55% we-traffic jikelele, okusho ukuthi unamandla okwenza ukuhlolwa kwe-A / B nokulungiswa kokuguqulwa kanye neminye imikhankaso yokukhangisa efanayo ngaphandle kokuthembela ku-Google Analytics ukuthatha izinqumo ezifanele. Ngisho noma ususa ukuvakashelwa okungalungile, abakwa-spammers bazokhipha amasayithi wangempela njenge-twitter.com, raddit.com, ne-addons.mozilla.org ukukhohlisa inani elikhulu labasebenzisi. Baye baqaphela futhi bangezela imetrikhi yangempela kwizizinda zokudlulisela phambili. Amacala amakhulu ekudlulisweni kogaxekile yi:
imali yokwenza imali
social-buttons-aa.xyz / ukudluliselwa
mahhala-video-tool.com / ukudluliselwa
boltalko.xyz / ukudluliselwa
isithwebuli-jess.top / ukudluliselwa
isithwebuli-jane.top / ukudluliselwa
buketeg.xyz / ukudluliselwa
begalka.xyz / ukudluliselwa
bukleteg.xyz / ukudluliselwa
bezlimitko.xyz / ukudluliselwa
isndovalka.xyz / ukudluliselwa
ukuhambisana-don.top / ukudluliselwa
abcdefh.xyz / ukudluliselwa
isithwebuli-john.top / ukudluliselwa
isithwebuli-irvin.top / ukudluliselwa
isithwebuli-somlando.top / ukudluliselwa
isithwebuli-walter.top / ukudluliselwa
Uma ubona ithrafikhi evela kula mithombo yokudlulisela phambili, amathuba ukuthi abagaxekile bashinte isayithi lakho.
Ungasusa kanjani ugaxekile wokudlulisela kanye nomgwaqo ongeyena ku-Google Analytics
Indlela engcono kakhulu yokususa ugaxekile wokudlulisa nokuhamba kwezimoto ngokusebenzisa izihlungi futhi ungafaki ugaxekile wokudluliselwa njalo. Kufanele futhi udale izihlungi zezingxenye eziphambili ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwesayithi lakho. Futhi, ungakha ubukhulu obungokwezifiso futhi wengeze imigqa eqondile elandelwa ngamagama wesizinda osolisayo.
Kumele ukhumbule ukuthi abakwa-spammers babhalisa izizinda eziningi nsuku zonke, ngakho-ke uma uphatha ama-akhawunti amaningi we-Google Analytics, kufanele ufake ithuluzi lokulandela inkinga le-Google elibizwa nge-Auto Spam Filters ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikelwa kwakho. 10)
Ngeshwa, i-Google ayizange ikhiphe isisombululo sendlela yokubhekana ne-spam yokudlulisela. Enye indlela yokukhipha ugaxekile wokudlulisela phambili ngokuhambisa izihlungi ezengeziwe kuma-akhawunti akho we-Google Analytics. Lokhu kuzokusiza ukuthi uvimbele ugaxekile ngezinga elithile.
Uma nje indlela yokufakazela ubuqiniso ibonisa ukuthi ubani othumela idatha ku-UA-ID ethize, kungenzeka ukuthi ususe ugaxekile wokudluliselwa. Njengoba i-Google Analytics isebenza ngaphansi kwesimo sokulandelela kwe-JS nokulinganisa, kufanele uhlale unake kokubili njengoba kuxhomeke kumishini yamakhasimende engaziwa ukuthumela izicelo ze-HTTP. I-Toolkit Toolkit iyisitifiketi esihle kunazo zonke ze-webmasters abafuna ukuqinisekisa ubuqiniso bezibalo zabo. Leli thuluzi ifakwe isihlungi sokugaxekile se-auto esigcina ukugaxekile kogaxekile.